T20I Tri-series: Zimbabwe Seek Redemption Against Pakistan
Following heavy losses at the hands of Australia, Zimbabwe and Pakistan both look to regain form in the tri-series. Zimbabwe enter the repeat fixture against Pakistan on the back of a devastating defeat courtesy of a rejuvenated Australia, who demolished the hosts by 100 runs to leave them with an extremely slim chance of reaching the final of this tri-series.
ICC |July 4, 2018, 9:59 AM IST
Harare: Following heavy losses at the hands of Australia, Zimbabwe and Pakistan both look to regain form in the tri-series. Zimbabwe enter the repeat fixture against Pakistan on the back of a devastating defeat courtesy of a rejuvenated Australia, who demolished the hosts by 100 runs to leave them with an extremely slim chance of reaching the final of this tri-series.
Aaron Finch's destructive and breathtaking knock of 172 helped the Aussies amass a huge total of 229/2, and there were few positives to take for Zimbabwe from Tuesday's outing.
Hamilton Masakadzapakistan vs zimbabweSarfraz Ahmed